BUDDHIST TERMS' Dictionary: AUSTERITY PRACTICE - ဓုတင်္ဂ
AUSTERITY PRACTICE - ဓုတင်္ဂ
AUSTERITY PRACTICE Dhutaṅga
ဓုတင်္ဂ - ကိလေသာကိုပယ်ရန် ကျင့်ခြင်း၊ ဓုတင်။
မိမိကိုယ်၏ သက်သာမှုကို မကြည့်ဘဲ ဆင်းရဲပင်ပန်းခံ၍ ကိလေသာကို ပယ်စွန့်ရန်နှင့် တရားကျင့်မှုတို့၌ တိုးတက်မှုရရှိရန် တင်းကျပ်စွာ ကျင့်ခြင်း ၁၃-မျိုးအနက် တစ်ခု သို့မဟုတ် ပို၍ ကျင့်နိုင်သည်။ လူသိများသော ဓုတင်အကျင့်မှာ တော၌နေ၍ ကျင့်ခြင်း၊ ဆွမ်းခံရသော ဆွမ်းကိုသာ ဘုဉ်းပေးခြင်း၊ စွန့်ပစ်အ၀တ်အပိုင်းအစဖြင့် ချုပ်သော သင်္ကန်းကို ၀တ်ဆင်ခြင်း၊ သင်္ကန်းသုံးထည်ကိုသာ ၀တ်ရုံခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
Practice leading to the eradication of defilement.
Scrupulous observance of one or more of thirteen kinds of austere practices, which are denoted by self-denial and austere regimen, are practiced to dispel evil and remove hindrances to spiritual progress.
The more important ones are: dwelling inaforest, taking only food one receives on the alms-round, wearing robes made out of rages collected fromadust heap, and confining oneself to the use of only three robes.